RAVELOSON CONSTANT : NITSIDIM-PASANA RAJOELINA – MyDago.com aime Madagascar
Andro voalohany amin’ity taona 2013 ity ny hetsiky ny mpomba ny Ankolafy Ravalomanana eny amin’ny Magro Behoririka. Nitohy teny an-toerana indray ny hetsika taorian’ny fetin’ny faran’ny taona sy taom-baovao. Ireo mpandahateny rehetra nandray fitenenana dia niarahaba ny vahoaka Malagasy tratry ny asaramanitra. Ny Ct Raveloson Constant dia nanambara fa enga anie ity taona vaovao ity mba hampazavazavakokoa ny tolona ataontsika.Lasa Rajoelina hoy izy nitsidim-pasan’i David. Nohariny tamin’ny tantaran’i Absaloma ao amin’ny baiboly Rajoelina. Teto Antananarivo hoy Constant no nahafantarana ny tantaran’i Absaloma, izay teny am-pahamarinana no nofantsihany Antananarivo. Efa taona nihatona nihazohazo teo foana. Nanongam-panjakana nefa tsy nahavita nitondra fanjakana.Nandeha nifona tany amin’ny fasan’i David i Absaloma hoy izy, izay efa impiry nilaza fa hanao fifidianana nefa tsy nahavita. Hotsaroantsika afaka 24 andro ny 26 janoary. Taorian’ny fanjakana tany Roma hoy izy dia Rajoelina no nahavita coliseum. Ny colisé dia natao famonoana olona. Efa nikipy isika hoy Constant fa ny filoha Ravalomanana Marc tsy hirotsaka fa tsy nanaiky i Absaloma. Ny anjarantsika hoy izy dia mamongatra toy ny nataon’ny AV7 ireny ny ota fady nataon-dRajoelina. Aoka ho fantatry ny vahoaka ity zavatra tsy rariny natony ity. Ireny natony ireny dia heloka mahavoafaty. Ny ho isan’ireo hofidiana izy roalahy hoy izy na mody eto ny filoha Ravalomanana Marc. Marina fa mafy ho azy izany fa izay no izy. Tsyhoe hanamasina eo amin’ny fasan’i David na hitsabo saina izy fa tsy vitan’izany io. Raha mbola mifanenjika eto hoy ity mpanao politika ity dia fahotana mahafaty nataon-dRajoelina. Ny fikambanana rehetra ato amintsika hoy izy dia ataovy amin’ny gazety sy ny rindrina ny ota fady natony teto. N’inon’inona lazain’ny filoha Ravalomanana Marc hoy Constant, dia tsy maintsy isika izao no milaza ny ota fady nataon-dRajoelina ary azon’ny iraisam-pirenena henjehina izy. Rhefa tsy ny filoha Ravalomanana Marc no miteny hoe avelao izy dia zavadoza no nataony teto.
Auteur Solo Razafy*Publié le 2 janvier 2013 Catégories Politique
4 réflexions sur « RAVELOSON CONSTANT : NITSIDIM-PASANA RAJOELINA »
Tena Grandy Vitesy mantsy…. ny fitsangatsangan’ny….. entana !! Tsy haraky ny maso intsony !!
ka eo tsisy mijery izay ataony eo fa tarito ny olona hivoka ao de hidio ny arabe ,reseo lahatra ireo miaramila manohana ny aradalana de tairo ,fa ohatrany ho fatin’ny hanoanana eto ny vahoaka ,ny foza mihamidofaka ny fofony,tena efa mankaleo maimbo,masiso
5 janvier 2013 à 12 h 16 min
BONNE ANNEE daoly aloha.
Tsy manadino ny tolona na dia sahirana aza e ! Mbôla ho avy !
Précédent Article précédent : MIRARY NY SOA MANOKANA HO AN’NY FILOHA RAVALOMANANA MARC
Suivant Article suivant : Filoha RAVALOMANANA MARC : TSY HIVADI-BELIRANO AMIN’NY VAHOAKA MIHITSY AHO